Oromiyaa! #Maatii Qabsaawotaa Hidhuun Dararuun Itti Fufeera! – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosOromiyaa! #Maatii Qabsaawotaa Hidhuun Dararuun Itti Fufeera!
ODUU Hatattama Jeneraal Marroon warana Bilxiginnaa 240 ol barbadesu lola Walloo kuno |Moha oromo
እዉነትን አጥፍቶ ለተፈጠረዉ ችግር መፍትሄ እንዳይገኝና ከተጠያቂነት ለማምለጥ የዞናችንን አርሶ አደር እና አመራሮች ኦነግ ሸኔ የሚል ታርጋ መለጠፍ መቼም ቢሆን ከተጠያቂነት አያድንም!!
#Maatii Qabsaawotaa Hidhuun Dararuun Itti Fufeera!
Lixa Oromiyaa Godiina wallagaa lixaa Aanaa/Ona Qilxuu kaarraa Ganda Sarbii jedhamu keessaa maatii Qabsahaa maarqos Indaaluu jumulaan hidhaatti naqaman.
Akka Odeessi madseen irraa bahu ifa taasisutti Eebla 14 galgala abbaa Maarqos kan tahe jaarsa waggaa 55 olii Obbo Indaaluu Barkeessaa ilma keetu shanee keessa jira shanee qallabdan jechuudhaan yeroo qabanitti hanga ati ilma kee fiddutti gadi sin dhiisnu jechuudhaan fuudhanii waajjira poolisii Aanaa Qilxuu kaarraatti hidhani.
Guyyaa Eebla 16 immoo haadha Maarqos Xaayituu wadaajooo fi Obboleettii isaa Maartaa Indaaluu itti dabaluudhaan mana hidhaa qilxuu kaarraatti fuudhanii deemanii hidhaniiru.
Haati qabsahaa kanaa aadde Xaayituu wadaajoo dhibee dhiibbaa dhiigaa hamaa kan qaban yammuu tahu ollaanii fi firootni ishee yaaddoo guddaa keessa jiraachuu nuuf himaniiru. Suuraan kun kan aadde xaayituu fi kan intala ishee Maartaa wadaajooti
Humni addaa naannoo Amaaraa WBOsakattaanajechuundaangaa Oromiyyaa seenan dhiigni isaanii xoo’oo dachee Oromiyaa ta’aa jiru.Yerooammaa kanatti warri hafte kotte nabaasi jechaa jirti .Oromiyaan dhiiga ilmaansheetiin nibilisoomtii Raabbiin in baasiin
GGO Ebila 15, 2021 iratti ergaa Jajjaboo dabarsee.
Oromia National Media-Arraata Biyyoolessa Oromiyaa